DOWNLOAD SOFTWARE UMMY VIDEO DOWNLOADER 1.10.0.0 - MMEMME NYOCHA - 2019
Banyere mgbanwe na iwu egwu nke VKontakte, nbudata egwu sitere na netwọk mmekọrịta a aghọwo ihe siri ike karị. Mana maka ihe nchọgharị eji na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ, enwere ihe ndị ị nwere ike iji mee ihe kachasị amasị gị. Otu ihe atụ nke a bụ ndọtị VKSaver, nke e mere iji budata egwu si netwọk mmekọrịta VK.
Nbudata VK egwu na VKSaver
Iji budata egwu site na netwọk mmekọrịta a, a ghaghị itinye ndọtị VKSaver na ihe nchọgharị weebụ. Iji budata ya, soro njikọ dị n'okpuru.
Ma rịba ama na nbudata egwu n'ụzọ dị otú a bụ ọnyà na-akwadoghị. Omume dị otú ahụ na-emebi ikike nwebisiinka, ya mere, VKontakte ma gbochiri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ nile iji budata egwu egwu.
Download faịlụ nwụnye ma soro ntuziaka na weebụsaịtị weebụ.
Ọ bụrụ na echichi ahụ nwere ihe ịga nke ọma, bọtịnụ ngwa ga-apụta na akuku aka nri nke ihe nchọgharị ahụ dị ka akara ngosi na leta "B".
Aka ekpe gaa na VKontakte page "My music" ma malite ịchekwa faịlụ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2: Iji VKSaver
Ka ibudata egwu kachasị amasị gị, mepee ndepụta nke ihe ndekọ gị ma kpoo òké na egwu ahụ achọrọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, akara ngosi nbudata na-egosi n'ụdị nke na-acha ọcha na-egosi na aka nri nke aha abụ.
Pịa na akara ngosi nbudata na window nke na-egosi pịa na bọtịnụ ọbara ọbara. "Download". Ọ bụrụ na nbudata adịghị amalite, gụọ ozi dị n'okpuru maka ihe ị ga-eme na nke a.
Mgbe nbudata, chọọ faịlụ na nchekwa ahụ. "Downloads" kọmputa gị ma ọ bụ tab nke otu aha ahụ "NchNhr" nchọgharị.
Ya mere, n'iji ndọtị VKSaver nyocha, ịnwere ike ibudata ọ bụla egwu ịchọrọ na kọmputa gị.